Filtrer les éléments par date : mardi, 16 juin 2020
mardi, 16 juin 2020 21:06
Ambohimalaza- Sambava: Halatra lavanila niharo vono olona
Lehilahy iray, 60 taona, no nahavita nandatsak’aina mba hangalarana lavanila. Lehilahy iray niambina sahan-davanila tao Antsahalalina Kaominina Ambohimalaza, Distrikan’i Sambava no namoy ny ainy ny alin’ny 12 jona 2020 no nitrangan’ity vono olona ity. Efa voasambotra ny nahavanon-doza natao famotorana.
mardi, 16 juin 2020 20:47
Fanambana – Vohémar: Roalahy tratra nitondra lavanila tsy nisy taratasy
Lavanila milanja 06 kilao no tra-tehaka tany amin’izy roalahy ireto, teo amin’ny sakana LA3 Kaominina Fanambana, Distrikan’i Vohémar. Lavanila « semi-préparée » ary tsy nisy taratasy fanomezan-dalana no hita tany amin’izy ireo.
Notazomin’ny Zandary nanaovana fanadihadiana izy roalahy, izay mponina ao Ampanefena ary hatolotra ny Fampanoavana aorian’izay.
mardi, 16 juin 2020 20:15
Vono olona miaro kolikoly: Nosamborina ny Ben’ny tanànan’i Vohimanga sy ny lefiny
Voasambotra ny tolakandron’ny 15 jona 2020 ny Ben’ny tanànan’i Vohimanga, Distrikan’i Bekily, sy ny lefiny. Voarohirohy ho mpiray petsapetsa tamin’ny fanafihana mitam-basy fiara kamiao mpitety tsena ny 07 may 2020, izay nahafatesana olona, izy ireto. Tsy hita nanjavonana rahateo izy ireto taorian’ny loza, fihetsika nampiahiahy ny havan’ny maty ka nahatonga azy ireo hametraka fitoriana.
Noentina tao amin’ny biraon'ny Vondrotobim-pileovana Androy izy roalahy ary natao famotorana avy hatrany. Nosavaina ny kitapo tany amin’izy ireo ary nahatratrarana vola mitentina sivy hetsy sy dimy tapitrisa Ariary (5 900 000 Ariary), izay voalaza fa hoentina hikarakarana ny hivoahan'ireo havany izay efa voatazona any am-ponja noho ity raharaha ity, ka homena izay olona tokony hahafaka azy.
Hatolotra ny Fampanoavana ny alarobia 17 Jona 2020 ny Ben’ny tanànan’i Vohimanga sy ny lefiny.
Solombavambahoaka miisa 72 no nandany tsy nasiam-panovana ny tolo-dalàna laharana faha 03/2019 mikasika ny famokarana sy fivarotana ny toaka gasy, natolotry ny Solombavambahoaka voafidy tao Ikongo, sady Filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena misahana ny Faritany Fianarantsoa, Razafitsiandraofa Jean Brunel, ny talata 16 jona 2020 folakandro teny amin’ny CCI Ivato.
Ho fampanarahan-dalàna sy fampanaraham-penitra ireo fepetra famokarana sy famarotana ny toaka gasy, no antony ary heverina fa hanana anjara toerana eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy ho fanandratana ny « Vita malagasy », hoy ireo nandany ity tolo-dalàna ity.
Raha tsy misy fiovana dia ny 23 jona izao no handalo ny fivoriana itambarabe eo anivon’ny Antenimierandoholona ity tolo-dalàna ity.
mardi, 16 juin 2020 09:58
Covid-19: Ny filoha TGV fa ny mpiara-miasa Mandoline
Efa roa andro nivalona izao no nanambaràn'ny Filoham-pirenena ireo fepetra rehetra momba ny hamehana ara-pahasalamana, anisan'izany ny filazany mazava fa tsy mandeha miasa ireo marefo ara-pahasalamana, toa ireo voan'ny diabeta, asmatika, misy tosi-drà, marary voa.
Voalaza ihany koa momba ny fanajana ny couvre-feu na ny tsy fahazahoana mivoaka manomboka amin'ny 10ora alina - 4ora maraina, voalaza ihany koa momba ny fampianarana sy ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana.
Hatreto dia mijanona ho kabary avokoa izany.
Raha aingam-piasa sy aingam-pandeha toa ny fiaran-dalamby TGV (Train à Grande Vitesse) ny filoham-pirenena, ireto mpiara-miasa anatanteraka ny baikon'ny Filoha anefa Mandoline, firan-dalamby raneny mavesa-body fotsiny, izy indray no lasa enta-mavesatra taritiny, atosika, hosorana menaka. Nantsoina mihitsy aza io Mandoline io hoe Meda.